चीनको पहिलो जेड खरगोश प्रक्षेपण अन्तर्क्रियात्मक device_News_Zhongshan Xiangdi प्रकाश कं, लिमिटेड
जब हामी जवान थियौं, हामी अक्सर एल्डरहरूले चन्द्रमाको बारेमा बताइएको कथा सुन्थ्यौं। मध्य शरद Festivalतु उत्सवमा यो प्राचीनहरूको सबैभन्दा सुन्दर कल्पना थियो। जब हामी ठूला हुन्छौं, हामीलाई थाहा छ कि आर्मस्ट्रstrong्गले पहिलो मानव पदचिन्हलाई चन्द्रमामा छोडे। मानिसहरूले एउटा ग्रह जित्छन् जस्तो देखिन्छ, तर बेहोश रहस्यमय र good्ग र राम्रो तृष्णा सँगै गायब देखिन्छ।
डोqक्विing जियुन यूटू यायोए
चांगशा आईएफएस चीनको पहिलो जेड खरगोश प्रक्षेपण अन्तरक्रियात्मक उपकरण
यो मध्य शरद Festivalतु महोत्सव, मून स्टार सिटी, परम्परालाई तोड्दै, चीजहरूको फ्यूजनले चन्द्रमाको लागि एकदमै रोमान्टिक र शान्त यात्राको अनुभव गर्‍यो। तपाइँले चाँदमा चढ्नुपर्दैन र तपाइँको स्टार सिटी अनुभव सुरू गर्न चांग्शा आईएफएसमा जानु पर्दैन।
चांग्शा आईएफएसको उद्घाटन भएदेखि यो L7 मूर्तिकला बगैचाको चुपचाप अवलोकन गर्दैछ। यो के हो? मध्य शरद Festivalतु उत्सव, यो अन्तमा के गर्न गइरहेको छ?
स्थिर खरगोश कागज किन चन्द्रमा साथीमा परिणत हुन सक्छ? अवश्य पनि यो कालो प्रविधि हो! पोर्चुगाली कलाकारहरूको साथ चीनको पहिलो प्रकाश पेन्टिंग 3D प्रक्षेपण अन्तरक्रियात्मक उपकरण अब अनलाइन छ!
चांग्शा आईएफएसले पोर्तुगाली कलाकार क्यारोल र नुनोसँग मिलेर चीनको पहिलो जेड खरगोश प्रक्षेपण अन्तर्क्रियात्मक उपकरण ल्यायो, जसले तपाईंलाई सेतो जेड खरगोशको लागि रंगीन नयाँ पोशाक बनाउन आमन्त्रित गर्दछ, नयाँ मिडिया कलाको साथ पारंपरिक मध्य शरद Festivalतु उत्सवको प्रकाश पार्दै, र पूर्वीय संस्कृति र पश्चिमी कलाको अनुभव चांग्शा आईएफएसमा गर्दछ। आकर्षण।
शक्तिशाली मल्टिमेडिया टेक्नोलोजीले तपाईंलाई कलाकार बन्न अनुमति दिन्छ, र खरायो कागज क्यानभास बन्छ। तपाईं आफ्नो मस्तिष्क फराकिलो र प्रकाश र छायाको विभिन्न संयोजन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको आफ्नै प्रकाश र छाया खरायो बनाउन।